फेसबुक कसरी चलाउने? - MeroReport
कुनै रोचक विषय उठान गर्नुहोस् र त्यसमा आएका साथीहरूका प्रतिक्रियालाई व्यक्तिगत रूपमा जवाफ फर्काउनुहोस्। तपाईंका साथीहरूलाई उनीहरूका प्रतिक्रिया ध्यान दिएर पढ्नुभएको छ भन्ने पार्नुहोस्। अफिसमा छु, मेरो कुकुर कति राम्रोजस्ता स्ट्याटस नराख्नोस्। धेरैजसो मान्छे दिउँसो अफिसमै हुन्छन् र तपाईंको कुकुरसँग कसैको सरोकार पनि हुँदैन।
वालका कमेन्टलाई सहजतासाथ लिनोस्। सान्दर्भिक प्रतिक्रिया दिनोस्। कसैप्रति आक्षेप नलगाई अन्तर्क्रियात्मक बन्नोस्। आफ्नो स्ट्याटसमा कमेन्ट वा लाइक आएन भनेर निरास नहुनुहोस्।
कसैको राम्रो महावाणी टपक्क टिपेर पेस्ट गर्दैमा खुब ठूलो काम गरेको नठान्नोस्। तपाईंलाई राम्रो लागेको महावाणी सबैलाई राम्रो लाग्नैपर्छ भन्ने छैन। अधिक मौलिक हुनुहोस्। विषयवस्तुबारे फरक ढंगले सोच्नोस्। सिर्जनशील प्रस्तुतिमा वाल अपडेट गर्नुहोस्।
सकारात्मक हुन नर्मन भिन्सेन्टको द पावर अफ पोजेटिभ थिङकिङ वा कर्ण शाक्यको सोच पुस्तक पढ्नैपर्छ भन्ने छैन। फेसबुक टिमले गरेको अनुसन्धानले नकारात्मक पोस्टमा बढी कमेन्ट र सकारात्मक पोस्टमा बढी लाइक हुने देखाएको छ। तपाईंलाई कान रातो हुने बहस चाहिएको हो कि वाहवाही चाहिएको? अब आफैं छान्नोस्।
सरल भाषा प्रयोग गर्नोस्
फेसबुक सञ्जाल साहित्यकार वा प्राधिकिहरूको भीडले भरिएको छैन। यो विश्वका धेरै मान्छे अप्राविधिक र गैरसाहित्यिक छन्। त्यसैले प्राविधिक र अरूले नबुझ्ने साहित्यिक गफ नछाँट्नोस्। बहुअर्थी भाषा प्रयोग नगर्दै राम्रो। वालमा लेख्दा सरल भाषा प्रयोग गर्नु उत्तम।
'म' को धाक नदिनोस्
अंग्रेजी शब्दहरूमाथि गरिएको अनुसन्धानले 'आई' र 'मी' (म र मेरो) को सट्टा यू (तिमी वा तपाईं) शब्द बढी लोकप्रिय देखाएको छ। त्यसैगरी 'हि' र 'सि' पनि बढी लोकप्रिय देखिएको छ। त्यसैले 'म' को धाक नदिनोस्।
घटना देख्नुभो? तत्काल अपडेट गर्नोस्
तपाईंको वरिपरि केही न केही रोचक कुरा भइरहेका हुनसक्छन्। कुनै ठूलै घटना देख्नुभयो भने चुप लागेर नबस्नोस्। मोबाइल वा क्यामराले फोटो, भिडियो खिच्नोस् र तत्काल अपडेट गर्नोस्। जनचासो विषयको तत्काल अपडेटले तपाईंलाई रातारात चर्चित बनाइदिनसक्छ।
(नागरिक न्युजमा प्रकाशित कृष्ण ढुंगानाको लेखको अंश । लेख पुरै पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)